कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक रामचन्द्र पौडेलले किन गरे बहिस्कार ? Nepalpatra कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक रामचन्द्र पौडेलले किन गरे बहिस्कार ?
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठक बहिस्कार गरेका छन् । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एकदिन अघि मात्र बस्न लागेको कांग्रेसको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेलले नजाने भएका हुन् ।
भोलि शुक्रबारदेखि काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन शुरु हुँदैछ । बिहान साढे ११ बजे बोलाइएको बैठक केहीबेर अघिदेखि मात्र शुरु भएको छ । तर जारी उक्त बैठकमा आफू सहभागी नहुने काँग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका छन् ।
पार्टी कार्यालय पुगेका नेता गगन थापाका अनुसार पौडेलले आफू बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी सभापति देउवालाई गराएका छन् । पौडेलले आफू व्यस्त भएकोले बैठकमा उपस्थिति हुन नसक्ने भनेर सभापति देउवालाई अवगत गराएपनि यसभित्र ठूलो कारण रहेको हुनसक्ने पौडेलनिकट नेताहरु बताउछन् ।
हिजोमात्र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहवाट सभापति पदको लागि सबै लड्ने भए आफू पार्टीबाटै अलग भएर राजनीति छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । संस्थापनइतर आफ्नो समूहबाट सभापति पदको उम्मेदवार टुंगो लगाउन चाक्सीबारीस्थित प्रकाशमान सिंहको निवासमा भएको बैठकमा पौडेलले सभापतिमा साझा उम्मेदवार बनाउन नसक्ने हो भने आफूलाई पार्टीबाटै विदा हुने बताएका थिए ।
पौडेलले सभापतिको एक मात्र उम्मेद्वार बनाउन प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालालाई दबाब दिएका थिए । तर पौडेलको सो दबाबलाई बेवास्ता गर्दै सिंह र कोइरालाले आफ्नो अडान अहिलेसम्म छोडेका छैनन् । यसरी संस्थापनइतर पौडेल समूहमा सभापतिको साझा उम्मेद्वारको विषयलाई लिएर पौडेल तनावमा भएको प्रष्ट हुन्छ ।